Homeसमाचारअञ्जु पन्तको बिहे पछी नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुने’वाला बेहुला ?
February 26, 2021 admin समाचार 7807
चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको विवाहको च’र्चाबीच नायिका रीमा विश्वकर्माले पनि दोस्रो विवाहको संके’त दिनु भएको छ । विवाह भएको २ बर्षमा डिभोर्स गर्नु’भएकी उहाँले फेरि बिहेको कुरा गर्ने बेला भैसकेको बताउनु भएको हो । ‘कमेडी च्याम्पियन २’ प्रशारणको बिषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रीमाले दोस्रो विवाहको विषय उ’ठान गर्नुभयो ।
संचारकर्मीसँग निकै नै रमाइलो शैलीमा प्रस्तु’त हुनुभएकी रीमाले अब बिहेको कुरा गर्दा हुने भन्दै प्र’शंग शुरु गर्नुभयो । नायिका विश्वकर्माले आफ्नो बिहेको कुरा गर्ने बेला भैसके’को तर्क गर्नुभयो । तर, उहाँले दोश्रो बिहेको योजनाको बिषयमा भने केही पनि बता’उन मान्नु भएन् । अभिनेत्री रीमाले आफूलाई ‘अर्थपूर्ण सम्बन्ध’ मनपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
कोही पनि पूर्ण रुपमा ठिक नहुने भन्दै उहाँले कहिलेकाही क’मजोर म’हशुश गरिरहेको बेलामा साथ दिने साथीको आवश्य’कता भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँको विचारमा यही नै अ’र्थपूर्ण सम्बन्ध हो । आफुले एकपटक बिहे गरेर सबै कुरा थाहा पाइ’सकेँको भन्दै आफ्ना लागि बिहे महत्वपूर्ण नभएको तर्क व्यक्त गर्नुभयो । अर्को बिहे आफ्नो कहिले गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो इच्छामा भर पर्ने पनि उहाँले जा’नकारी गराउनुभयो । – इताजा खबरबाट
कांग्रेस नेता एवं पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई म’स्तिष्का’घा’त भएको छ। जोशी’लाई बिहीबार राति स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो।त्यसपछि उनलाई वीर अस्पतालमा लगिएको उनको परिवारले जनाएको छ। ‘राति १२ बजे समस्या देखिएपछि वीरमा लग्यौं, अहिले नर्भिकमा ल्याएका छौं, ब्रेन ह्या’मरेज भएको रहेछ,’ जोशीका दाजु एवं कांग्रेस नेता रा’जुराज जोशीले बताए।
चिकि’त्सकका अनुसार जोशीको म स्तिष्क’मा जमेको र ग त सफा गर्ने काम अ’परेशनका क्र’ममा गरिनेछ ।कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्वीट गर्दै जोशीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा रुग्ण र बन्द अवस्था’मा रहेका आठ वटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाएका हुन्। उनका पालामा थुप्रै औद्योगिक अवरो’धहरु हटाइएको थियो। कानुनी सुधार पनि गरिएको थियो।
के हो म’स्तिष्क घा’त ?
अ’प्रत्या’सित रूपमा अ’पर्झ’ट हुने, त’त्कालै ज्या न जा न पनि सक्ने र बाँ’चिहाले पनि अधिकांश वि’कला’ङ्ग, परनि’र्भर र पराश्रित भएर बाँच्नुपर्ने यो समस्याको मुख्य कारण म स्ति’ष्कको र क्तस’ञ्चारसँग सम्बन्धित छ । म स्तिष्कलाई र’गत आपूर्ति गर्ने धमिनीहरु फु टेर र क्तस्रा व भई वा र’क्तनलीभित्रै र गतकोको थे’ल्ला ज’मेर वा अन्य का’रणले र क्त नली थु निएर स्नायु तन्तुहरुमा पोषक तत्व र अक्सिजन आपूर्ति हुन नस’क्दा तन्तुहरु म ‘र्न जाने समस्या नै म स्तिष्क घा’त हो ।
म ‘स्तिष्क हाम्रो शरीरको केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष हो भने सम्पूर्ण मानसिक क्रियाहरुको प्रो’सेसि’ङ इकाई पनि हो। म’स्तिष्क घा’त हुँदा नष्ट भएका स्नायु तन्तु’हरुले गर्ने कार्य सुचारु हुन नसक्दा ज्या नै जाने वा बाँचेकाहरूमा शरीर, मन र भावनासँग सम्बन्धित स’मस्या देखापर्छन् ।
लक्षण देखिने बित्तिकै बिरामीलाई जति’सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउन सकियो, त्यति नै धेरै बचाउन वा विकलाङ्गता कम गराउन सकिन्छ। म’स्तिष्क घा’तको आपत’कालीन अवस्था सम्हाल्न न्युरोलोजिष्टहरुको टिम नै चाहिन्छ भने रेडियोलोजिष्ट र प्याथोलो’जिष्टहरुको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
बलिउडका चर्चित गीतकार भिख मा’ग्दै दैनिकी चलाएको थाहा पाएपछि नेहाले गरिन् ठुलो सहयोग, स्टेजमा चल्यो रु’वाबासी (भिडियो सहित)
नायक पल शाह र रियाशाको यस्तो रोमान्स, भयो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस)
August 25, 2020 admin मनोरंजन, समाचार 30295
नायक पल शाह र रियाशाको यस्तो रोमान्स, भयो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस) नायक पल शाह र मोडल रियासा दाहा’लको अ’भिनय रहेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । “लाइदिम कि मोहनी”बोलको गीत’को म्युजिक भिडि’योसहित युट्युबमार्फत सार्वज’निक गरिएको
मेलम्ची बाढीसँग दुई मिनेट लडेका काशिनाथको पेटमा १ किलो बालुवा, आँखै अगाडि साथि वे’प’त्ता बनायो (भिडियो सहित)
June 22, 2021 admin समाचार 4721
असार १ गते आएको बाढीसँग २ मिनेट लडेर आफ्नो ज्या’न जोगाउन सफल सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका-२ का काशिनाथ भण्डारी आफू बाचे’कोमा खुसी हुनुभन्दा पनि बाढीले गरेको क्षति’लाई देखेर दुखी बनेका छन् । आसार १ गते अचा’नक
खाली पेटमा कहिल्यै नखानोस् यस्ता खानेकुरा, हुनसक्छ शरीरमा हानी
December 25, 2020 admin समाचार 8520
खानपानको तौरत’रिका तथा समय मिला’उदा शरीर स्वस्थ हुन्छ । सामा’न्यतयाः फलफूल भनेर हामि जुन बेला पनि खान तयार हुन्छौ । तर हाम्रो त्यस्तो सो’चाईं गलत हो । जानकारहरूका अनु’सार यी खानेकुरा खाली पेट खानुहुँदैन ।